Our Shining Days ( 2017 ) - Myanmar Asian TV
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ တရုတ်ရိုးရာဂီတ နဲ့ နိုင်ငံခြားဂန္တဝင်ဂီတရယ် ကြားက အပြိုင်အဆိုင်တွေကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ ဇာတ်အိမ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီဇာတ်လမ်းထဲက ဂီတ၂ဖွဲ့ အပြိုင်အဆိုင်တီးခတ်ကြတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းဟာ onlineမှာအရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့တာမို့ ပရိသတ်ကြီးလည်းမစိမ်းလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။
တရုတ်ဂီတက ယန်းကျွင်ဆိုတဲ့ တရုတ်တူရိယာကိုတီးခတ်တဲ့ ချန်ကျင်းဆိုတဲ့ကျောင်းသူဟာ ကမ္ဘာရန်သူ ဂန္တဝင်ဂီတက စန္ဒရားတီးတဲ့ ဝမ်းဝမ်ဆိုတဲ့အရမ်းချောတဲ့ကျောင်းသားကို proposeလုပ်ရာကနေ ဒီလိုထိပ်တိုက်တိုက်ပွဲကြီး စလာတာပါပဲ ။
ယန်းကျွင်ဆိုတာဘာလဲလို့ မေးတဲ့ဝမ်းဝမ်ကို ယန်းကျွင်ကိုသိလာစေရမယ်ဆိုပြီး ကြုံးဝါးခဲ့တဲ့ ချန်ကျင်းဟာ သူတို့ဂီတနာမည်ကြီးကျော်ကြားစေဖို့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတော့တယ် ။
ဒီလိုအဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့ လူရှာတဲ့အခါမှာတော့ တရုတ်ဂီတမှာ တစ်ဖက်ကမ်းခတ်တော်တဲ့ 2Dကမ္ဘာကိုရူးသွပ်သူ ကောင်မလေး၎ယောက်ကို မက်လုံးတွေပေးပြီး စည်းရုံးခဲ့ပါတယ် ။
အဲ့နောက်မှာတော့ Dimension 2.5ဆိုတဲ့အဖွဲ့နာမည်နဲ့ ကျော်ကြားလာပြီးတဲ့နောက် ဂန္တဝင်ဂီတနဲ့ပါ ထိပ်တိုက်ပြိုင်ဆိုင်ဖို့ထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။
ဂီတ၂ဖွဲ့လုံးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေရင်းထားတဲ့ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်သူကနိုင်မှာလဲ?
ချန်ကျင်းရဲ့ ဖူးစာရှင်ကရော စန္ဒရားတီးတော်တဲ့လူချောလေးဝမ်းဝမ်လား အရင်တည်းကအနွံနာခံတဲ့ သူငယ်ချင်းလေ လီယူလား ဆိုတာတော့ ဆက်ကြည့်ပေးပါအုံး
Translator : Hsuho
Actors: Eason Chan, Geng Le, Lulu Xu, Yan Ni
Openload.co Myanmar1GB Download
ကဲ …. မင်းသမီး Lu Yifei ( ဂူးဂူး ) နဲ့ Ice Fantasy ဇာတ်လမ်းထဲက ရေခဲဘုရင် ခါးဆို ( William Feng ) တို့ရဲ့ Hanson and the Beast လို့ ခေါ်တဲ့ ဇာတ်ကားသစ်လေးတကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … မြန်မာလိုနာမည်ပေးရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ”…
Trailer: Our Shining Days ( 2017 )